आजको पत्रपत्रीका बाट Archives - Page3of 137 -
काठमाडौं — काठमाडौंमै एक करोड लगानीमा नक्कली स्याम्पु र मसला उत्पादन गर्ने सञ्चालककाे रुपमा रहेका श्रीमान् श्रीमती पक्राउ परेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन ‘हेड एन्ड सोल्डर’ र ‘बिएमसी’ मसलाको नक्कली उत्पादन गरेकाे अाराेपमा प्रहरीले उनीहरुलारंइ पक्राउ गरेकाे हाे। पक्राउ पर्नेमा चन्द्रागिरी–१५ नैकापका वासुप्रसाद ब...
बैतडीमा पानीबिनाको दमकल पुग्याे आगो निभाउन, भयाे यस्ताे रमिता!
काठमाडाैँ । बैतडीमा पानीबिनाको दमकल आगो निभाउन पुगेपछि पीडित तथा प्रहरीलार्इ समास्या भएकाे छ। पानीबिनाको दमकल राखेर एकाएक घटना स्थलामा पुगेपछि पीडित तथा प्रहरी एक छिन अचम्भित भएका थिए । पाटन नगरपालिका ४ बस्ती जोलबाँजमा आईतबार बिहान आगलागी हुँदा पानीबिनाको दमकल आगो निभाउन पुगेको थियाे। स्थानीय शेरसिंह महारको खरको ...
मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन हुन्छ : सांसद पौडेल
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान मन्त्रीहरुको कार्यशैली र मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नेबारे व्यापक छलफल हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,'अब बस्ने स्थायी समिति बैठकमा मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा ब्यापक छलफल हुन्छ' काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित...
भाेलि हुँदैछ ‘मृघशिरा’ उल्का वर्षा, के हो उल्का वर्षा ?
काठमाडौं -भाेलि आइतबार रातिदेखि मृघशिरा’ उल्का वर्षा हुँदैछ। ३२ वर्षपछि हेलीको पुछ्रेताराका कारण हुने मृघशिरा उल्का वर्षा आइतबार रातिदेखि सोमबार बिहानसम्म देखिने भएको छ । नेपाल एस्ट्रानोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईका अनुसार अत्याधिक उल्का वर्षाको बेला प्रति घण्टा २० सम्म उल्का देखिने अनुमान छ । ती उल्का वर्ष...
काठमाडौं : विगत चार वर्षदेखि तस्कारी हुँदै आएको सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका एक मुख्य अभियुक्त बेनु श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीले फेला पारेकाे छ । श्रेष्ठलाई प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा फेला पारी पक्रेर नेपाल ल्याएको छ । श्रेष्ठ ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या मुद्दाका मुख्य अभियुक्त रहेकाे छन्। ...
काठमाडौं । धनुषाको औरही–२ परवाहाकी १० वर्षीया बालिकाको सामुहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ ।घरनजिकै लागेको दुर्गा पूजा हेर्न गएकी उनलाई चिनजानकै दुई युवकले फकाएर एकान्तमा लगी बलात्कारपछि हत्या गरेका हुन् । घटनामा संलग्न स्थानीय विनोद मुखिया विन र नथुनी पण्डित कुमहारलाई धनुषा प्रहरीले शनिबारै पक्राउ गरेको छ । शुक्र...
यी दुर्इ देशले नेपालमै कार्यालय खोलेर निःशुल्क कामदार लैजाने
काठमाडौं । दुई वटा खाडी मुलुक कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपालमा नै कार्यालय खोलेर नेपाली कामदार लैजाने भएका छन्। नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका यी दुर्इ देशमा अब नेपाली कामदारलार्इ राहत मिल्ने अनुमान गरिएकाे छ। यसरी आपूर्ति गरिने कामदारका सबै प्रक्रिया निशुल्क र सरकारीस्तरमा नै हुने बताईको छ। वैदेशिक र...